Tags: njikọ azụlinknjikọ azụbacklinksikwu njikọngosidofollownjikọ dofollowụlọ ọrụ gọọmentị etitiftcgoogle search njikwagoogle usoro ọrụgoogle +njikọ ịkpataNjikọ njikọnjikọ-ụlọnofollownofollow njikọnhazi ọchụchọakwụ ụgwọ njikọnjikọ njikọkpọlrel dofollowrel nofollowrel nkwadorel ugcndị na-arụ ọrụ nyocha engineọchụchọ ọkwankwado njikọuGCnjikọ ugcwordpress dofollowWordPress nofollow
Jenụwarị 21, 2007 na 1:35 PM
Daalụ maka ịkọwa Doug ngwa mgbakwunye Doug. Amaara m na WordPress gbakwunyere rel = ”nofollow” na njikọ na nkwupụta, ekwenyekwara m n'echiche gị na ọ bụrụhaala na a na-ekwupụta okwu, njikọ ọ bụla dị mkpa hapụrụ na nkwupụta ahụ kwesịrị otuto ha.
Jenụwarị 22, 2007 na 2:42 PM
Daalụ maka n'ọnụ; Naanị m tinye nkwụnye ahụ (usoro enweghị mgbu.)
N'ajụjụ ọnụ a spammer kwuru, sị:
“Ndi atụmatụ nke Google, Yahoo na MSN, ịsọpụrụ“ esoghi ”njikọ ga-emeri Sam na ndị ọzọ? Echeghị m na ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu n'oge dị mkpirikpi, ọkara ma ọ bụ ogologo oge. ”
Ajụjụ ọnụ zuru ezu bụ ebe a:
Jenụwarị 22, 2007 na 5:56 PM
Martin, ezigbo edemede. M na-eche otú ọrụ ya siri ike na afọ gara aga!
Ọ nwere ụzọ iji họrọ nke njikọ m chọrọ ka a na-agbaso (wow, curious language construct I made)? Ihe kpatara ya bụ mgbe m na-ezo aka na saịtị ụfọdụ nke crappy na ihe ọmụma dị na ya, agaghị m akwalite ya nke ukwuu. Ọ bụghị dị ka mmachi (ọ bụrụ na m rụtụ aka na, sịnụ, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke dị iche na nke m, mana ọ bụrụ na edobere ya nke ọma ma tinye ya nke ọma, enweghị m nsogbu ịkwalite ya), mana dịka ụzọ isi lụso ọgụ ọgụ wee gbadaa ala. ọdịnaya crappy.
Enweghị m nsogbu iji aka dezie njikọ. M na-edezi nkọwa iji gbakwunye njikọ Google Analytics, njikọta aha ma dozie ederede ndị ọbịa, mana ọ dị mma iji gbanye ya ruo n'ókè ụfọdụ.
Chọpụta, Cannwere ike ịgbakwunye rel = ”nofollow” n’ime njikọ ọ bụla ị chọghị ka Google kwalite. Ihe Nlereanya:
Ee, nke ahụ nwere ike ịdị mfe karịa ịnwa ihichapụ ha. M na-edebe ihe niile a na-ejikarị eme ihe yiri nke ahụ na Ndetu Opera m (ọ dị mma iji nweta ibe, iberibe, na snippets koodu dị n'ime ihe nchọgharị gị oge niile), yabụ ọ bụ naanị mpekere m.
Achọtara m nke a. Kwesịrị ịlele tupu ịkpọtụrụ gị site na ụdị ịkpọtụrụ.
Ekwenyere m Doug. Ọ bụrụ na ị na-aga nsogbu nke ịgụ na nhazi okwu ọ bụla na agbanyeghị (nke ị kwesịrị ịbụ) mgbe ahụ ọ bụ ihe ezi uche dị na iji ụgwọ njikọ kwesịrị ekwesị kwụọ ụgwọ ezi okwu.
Will ga-enwetakwu "Nnukwu ọkwa" kwuru n'ihi ya, mana ndị ahụ na-abanye ozugbo n'ime ma ọ bụ.
Ndị spammers ahụ doro anya nwere aha dịka "SEO ọkachamara" ma ọ bụ "Web design Atlanta" ma ọ bụ ihe ejiri mara isiokwu. Ndị ezigbo ahụ na-enwekarị ezigbo aha dịka "Lisa" ma ọ bụ "Robert".
Cool na i guzoro na mba ozo. Ọ bụla kwuru na n'ihi? You nweta nsonaazụ ndị ị bu n'uche?
Nsonaazụ a agaghị adị m mkpa dịka ha ga - adịkwa ka ndị be anyị! Za ajụjụ na saịtị m kwesịrị inye aka na ogo ogo Google gị.
M na-agba ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ Drupal kwadoro, n'ihi ya, ọ na-awụnye na-enweghị rel = nofollow, ị ga-etinyere ngwa mgbakwunye iji tinye nke a. Ọ bụ ezie na m ga-eme nke a nwa oge, mana achọpụtara na naanị ihe kpatara ịme nke a bụ echiche enweghị isi na ihe m na-ahapụ na saịtị ndị ọzọ anaghị enye m ọkwa peeji, ebe m na-enye ha ọkwa ọkwa. Ekpebiri m ịhapụ ya ka ọ dị.
Imirikiti ndị mmadụ na-ekwupụta okwu ha nke mere na ha ga-ata ndị wepụtara oge ịhapụ okwu bara uru na saịtị ahụ.
M agbakwunyela usoro ịza ajụjụ na saịtị m ka m wee ghara inwe nkụda mmụọ maka ihichapụ nkọwa ndị dị na mpaghara isi awọ.
Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ahapụ okwu na-ekwu "ọmarịcha saịtị", ana m atụ aro ka ihichapụ okwu ahụ, belụsọ na ha hapụrụ ubi URL oghere. Enweghị ụdị iwu a, enwere m ike ịlele njikọ ahụ wee kpebie dabere na saịtị ahụ.
Daalụ maka Ama ahụ, achọrọ m ịmata ihe.
ụfọdụ ndị na-ekwu na ibe ka ga-edepụta aha ya site na mkpado na-esoghị. nke a obu eziokwu?
Eeh, ọ bụghị igwe nchọta niile na-asọpụrụ na-esoghị. Ọ na - eme na Google, ebe ọ bụ nnukwu nwa na mgbochi, ọ bụ ezie. Odoghi m anya maka Live, Jụọ ma ọ bụ Yahoo! Nwere ike iwere ụfọdụ igwu iji chọpụta.
Ezigbo ọrụ - a na m egbochi mgbochi.
E kwesịrị ịgụ njikọ ọ bụla, ma ọ bụ ị gaghị ekwe ka njikọ ahụ dịrị. Amaara m ndị mmadụ na-etinye aka na ntinye na njikọ ha na post ha ka ha wee ghara inwe njikọ nke ọpụpụ, yana tiori na saịtị ndị na-ejikọ karịa ha jikọrọ aka nweta PR dị ala.
Ọ na-ewute m na njedebe.
Anyị emeela otu na blọọgụ akụkọ anyị na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nsonaazụ dị mma n'ihe gbasara ntinye aka nke ndị ọrụ na ihe ọ searchụ engineụ injinia. 🙂
IMO rel = ”nofollow” abaghị uru ọ bụla, ọ gaghị akwụsị spam ikwu maka ndị spammers na-eji sọftụwia. Ngwọta kachasị mma megide ndị spammers na-ekwu bụ plugins dị ka Akismet, Omume Ọjọọ na captchas ma ọ bụ ajụjụ mmadụ.
ee? ndị nzuzu wiki? s!
na-eche ihe ga - eme ma ọ bụrụ na anyị niile na - eji ha eme ihe?
Ndewo, aga m achọ ịjụ ma WordPress, Yahoo 360, Blogger, wdg jiri “nofollow” na ntinye ederede blog. ntụgharị Ọ bụrụ na m dee post na blọgụ m ma tinye njikọ n'ime ya, njikọ njikọ m na-agbanwe agbanwe rel = nofollow?
Aug 6, 2007 na 10:50 PM
I meela nke ukwuu maka edemede magburu onwe ya banyere àgwà na-esoghị. Maka na arụnyere ya na ndabara na WordPress, ana m eche na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị na ọ dị ebe ahụ.
Echere m na iwu nke ikwe ma ọ bụ kwenye okwu na onye ọ bụla kama ịbelata ha niile bụ ụzọ kachasị mma.
Aug 15, 2007 na 3:00 PM
Daalụ maka post a! Amaara m na obere oge m chọtara ya, mana amalitere m ịde blọgụ ma ana m achọ ịchọpụta ihe kpatara mkpirisi akwụkwọ mkpanaka ahụ na-etinye na ntinye na njikọ m. Aga m etinye dofollow ekele maka ịchọta blọọgụ gị, ikekwe nke ahụ ga-agba ndị ọzọ ume ikwu okwu na mmekọrịta na blọọgụ m ọhụụ.
Amaghị m ego ole ọ na - enyere aka na ntinye aka. Otú ọ dị, echere m na 'nnụnụ nke nku na-efekọ ọnụ' yabụ ị ga-enwe ike ijikọ ma sonye na blọọgụ ndị ọzọ na-anaghị eji nsị. Na ogologo oge, echere m na enwere uru.
Ọ na-amasị m n'ihi na ekwenyere m na ọtụtụ n'ime ihe ịga nke ọma m na ịde blọgụ bụ maka itinye aka nke ndị dị ka gị na mkparịta ụka ahụ. Gini mere m ga eji enweta elele niile?!
Aug 26, 2007 na 6:58 PM
Daalụ maka ozi a Doug, ejiri m aka na-agbakwunye mkpado rel na njikọ m mana echetụbeghị ụdị a maka ikwu. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, enwere m ike ịmalite ime nke a ebe ọ bụ na m agbabeghịrị ihe m kwuru n'ọtụtụ.
Ndewo, m wụnye ihe mgbakwunye DoFollow ụbọchị ole na ole gara aga, m wee nata ụfọdụ ekele site na obere blọọgụ m jikọtara na isiokwu na nkọwa m.
Nnukwu ụzọ, ma naanị na nchikota na njikwa / njikwa njikwa, ma ọ bụghị na blọọgụ ga-aghọ isi mmalite spam ngwa ngwa karịa ka anyị chere.
Dec 13, 2007 na 8:31 PM
Otú ọ dị, ihe a na-enweghị isi na-afụ ụfụ maka blogger na onye na-ekwu okwu ziri ezi… na-atụ m na mmadụ nwere ike ịmepụta ngwa mgbakwunye nke ga - enyere / gbanyụọ nofollow na uche onye ọrụ. ngwa mgbakwunye nofollo niile m jiri kpochapu mkpado nofollow na nkọwa na / ma ọ bụ onye na-ekwu okwu. Dị ka ị kwuru, ụfọdụ ndị na-ahọrọ iji kwado ihe ndị ọrụ ha kwuru
Ekwere m, Jessie! WordPress enwetala nzaghachi ahụ n'ụzọ doro anya ma doo anya, mana echere m na ha nwere ike nrụgide site na Nchọgharị Nchọgharị ka ị ghara ime nhọrọ ahụ.
ihe na-akpa ọchị doug bụ na ọtụtụ n'ime ndị "na-akwado" nofollow nwere nofollow attribs na saịtị ha / blọọgụ…. ọ bụghị ihe na-atọ ọchị na ndị mmadụ na-ekwu ihe ma na-eme ihe ọzọ? i nwetara mmasi m maka inwe dofollow ebe a dị ka na blọọgụ m… am not just sure how this will affect my PR in google.
Daalụ maka ịkọwa nke a. Naanị m na-amalite websaịtị, na m na-elele nhọrọ blọọgụ niile. O di nwute na akụrụngwa mkpọ mkpọ nke m nwere ike iji na saịtị m na-esi na ice, m nọ na-eche maka iji wordpress, yabụ ekele maka ikwu maka ihe ndị na-eso ma ọ bụ enweghị usoro esemokwu. Enwere m weebụsaịtị 2, nke na-enweghị njikọ google, na ụbọchị nke ọzọ saịtị m nke abụọ gosipụtara 10 backlinks google site na-acha anụnụ anụnụ, enwere m obi anụrị! M na-etinye na blọọgụ oge niile na amaghị m na ị nwere ike ịnweta njikọ ahụ, (duh, newbie!) Na mberede, enwere m njikọ 10 sitere na Dawud Miracle - onye nọ na heck ọ bụ ???? M gbasoro njikọ ahụ laghachi na saịtị ya ma chọpụta na ọ bụ ọtụtụ n'ime ọtụtụ blọọgụ m biputere, ekele Miracle, ọ bụ ọrụ ebube !!! Mgbe ahụ, m na-eche otú o si mee, na ihe mere na ọ mere na mbụ! Yabụ ugbu a enwetara m ya. Mgbe m nwetara ngwanrọ blọọgụ m, m ga-enwerịrị ihe ndị a, ọ bụghị ụdị ndị na-esoghị. Nwere ezu ịga nke ọma n'ihi na anyị niile… ..